10 Iindlela zokuBhalisa iiMemori zokuHamba | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iindawo ezinika umdla Tips > 10 Iindlela zokuBhalisa iiMemori zokuHamba
Iingcebiso zokuhamba ze-Eco, Ukuhamba eYurophu, Iindawo ezinika umdla Tips
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 13/05/2022)
Ukuhamba yindlela emangalisayo yokufumanisa iinkcubeko, zindawo, kunye nabantu. Xa sihamba sifunda kakhulu kangangokuba ngamanye amaxesha kubonakala kungenakwenzeka ukukhumbula zonke iindawo ezintle kunye nezinto esizenzileyo. kunjalo, la 10 iindlela zokubhala iinkumbulo zokuhamba ziya kwenza iinkumbulo zakho ziphile ngonaphakade, entliziyweni yakho, kunye nekhaya. Ukusuka kwi-scrapbooking ukuya kwimidiya yoluntu, kukho indlela emangalisayo yokuba wonke umhambi akhumbule amaxesha nanini na ufuna.
1. Iindlela zokuBhalisa iiMemori zokuHamba: Ijenali yokuhamba
Ukubhala phantsi ii-anecdotes ezincinci ezisuka kweyakho uhambo lonke eItali, okanye igadi yebhiya ePrague, ndikhumbula indlela ilanga elalikhanya ngayo ngaloo mini, okanye incasa yebhiya kuba zizinto ezincinci ezenza uhambo lungalibaleki. Ukugcina ijenali yokuhamba yindlela entle yokubhala iinkumbulo zakho zokuhamba.
Ukubhalwa kwemihla ngemihla kwijenali yohambo, okanye amaxesha akhethekileyo, konke kuxhomekeke kuwe. Abanye bayakonwabela ukubhala isishwankathelo seembalasane zosuku, ekupheleni kosuku, ngoxa abanye bephethe incwadi encinane yokubhalela, ukukwazi ukubhala yonke into xa isenzeka ukuba kukho utyekelo lokulibala amagama eendawo, kunye nabantu, izenzakalo. Hayi indlela ekumnandi ngayo ukuskrola kwijenali yohambo ekhaya, okanye nakwenye indawo kuhambo lwakho, kwaye ukhumbule abantu abamangalisayo odibene nabo, kunye neendawo ezityelelweyo, kwaye ubone ngokwenene ukuba uhambile kangakanani.
Dijon ukuze Provence Uqeqesha
Paris Provence Uqeqesha
Lyon ku Provence Uqeqesha
EMarseilles ku Provence Uqeqesha
2. Yenza iNcwadi yeSilaphu sokuHamba
Ukudibanisa iifoto, amakhadi, iimephu, okanye iiposikhadi kwi-scrapbook yindlela eyonwabisayo yokubhala iinkumbulo zokuhamba. Ngaphezu, if you are a creative person, emva koko uya kwenza i-scrapbook emangalisayo. In a similar way, i iindawo ezingenakulibaleka sindwendwela sityebisa ubomi bethu kwaye songeze iileya kubuntu bethu njengabantu, nabahambi, kwaye ngokunjalo izaleko ozongeza kwiscrapbook. Iileya zezitikha, amaqhekeza ephepha, imifanekiso, kunye neenkumbulo ezibhaliweyo, uyakongeza kumntu onguye, kunye nehlabathi lakho elingaphakathi.
Ukwengeza, Ii-scrapbooks ziyindlela emnandi yokwabelana ngohambo lwakho nabahlobo kunye nosapho. Amabali ohambo lwakho aphila kwi-scrapbook, iifestile kwiimboniselo, isiko, uluntu, kunye namaxesha, nxiba ubomi obunemibala, kwaye inokwenza incwadi ye-scrapbook ibe yinto enomdla, imfihlelo, kunye nencwadi enomdla yokuzisa iindawo kubantu abangazange bahambe apho.
3. Yila iAlbham yeFoto yakho
Ukubhala kunokuba lucelomngeni kwabanye abantu; ukufumana amagama afanelekileyo, okanye ukukwazi ukunqumama ngexesha lohambo ukubhala. kunjalo, ukuthatha imifanekiso kulula, ngokukhawuleza, kwaye kumnandi ukwenza xa uhamba. ngoko ke, ialbham yeefoto yindlela eyoyikekayo yokubhala iinkumbulo zokuhamba.
Ngokucofa nje kube kanye ubamba ubuhle bolwandle eIreland okanye eTuscany ekutshoneni kwelanga. ke, ungakhetha ezona foto zikhethekileyo, kwaye uziqokelele kwicwecwe ledijithali, ngamanqaku amancinci, imihla, kunye nezikhumbuzo ezincinci zokukunceda wabelane ngebali lohambo lwakho. Ngaphezu, i-albhamu yeefoto ayithathi indawo enkulu yokugcina, kwaye ungayibeka phezu kwetafile yekofu, okanye wenze ishelufu ekhethekileyo yazo zonke ii-albhamu zakho zeefoto zokuhamba.
4. Iindlela zokuBhalisa iiMemori zokuHamba: Imizekeliso
Ukuhlala kwiigadi zaseVersailles okanye ukonwabela Iimbono zoNxweme lwase-Amalfi - 2 kwezona ndawo zingaqhelekanga eYurophu, Ufumana umnqweno ngequbuliso wokuthatha umbono othandekayo. ke, ngamaxesha anje, Ungakhupha incwadi epokothweni kwaye uqalise ukwenza i-doodling kude nemizuzu kunye neendawo eziphambi kwakho.
Ngelixa i-doodling ivakala njengendlela enobuchule yokubhala iinkumbulo zakho zokuhamba, ayifuni ukuba ube netalente yokupeyinta okanye umzekeliso. Ngaphezu, imizekeliso yakho akufuneki ibe kwinqanaba elifanayo neleMonet. Ekubeni eyona nto ibalulekileyo ngokubonisa iinkumbulo zokuhamba kukuba zezomntu, kwaye ube neshelufu egcwele uhambo lwakho olubonisa ukukhumbula uhambo olumangalisayo kulo lonke elaseYurophu.
5. Qokelela kwaye Ubonise amakhadi eposi
Zixhome efrijini, yenza ikholaji kwigumbi lokuhlala, okanye udonga oluphefumlelweyo, iiposikhadi zi izikhumbuzo ezoyikisayo. Ukwengeza, amakhadi eposi yenye yeendlela eziphezulu zokubhala iinkumbulo zokuhamba, kulula ukuzifumana, kwaye kufuna zero inzame kwisiphelo sakho. Ithengiswa kuyo yonke ivenkile yezipho, kunye nemarike yesitalato, iiposikhadi zisisikhumbuzo esidumileyo, ukukhumbula uhambo.
Nantes ku Bordeaux Uqeqesha
Paris Bordeaux Uqeqesha
Lyon ku Bordeaux Uqeqesha
EMarseilles ku Bordeaux Uqeqesha
6. Iindlela zokuBhalisa iiMemori zokuHamba: Ukubloga
Ukugcina iblogi yevidiyo, okanye ngamanye amazwi, vlogging yindlela eyoyikekayo yokubhala iinkumbulo zokuhamba, ukuhlala ubomi bonke. Thatha ikhamera, okanye ifowuni enekhamera ephezulu, kwaye wenze iakhawunti yeYouTube ukuze ulayishe iividiyo zakho zokuhamba, kwaye amava akho aya kuhlala ngonaphakade. Ukubloga kukuvumela ukuba ukhethe ezona freyimu zilungileyo, balisa amabali, kwaye ubhale amaxesha - ngokwembono yakho.
Ngaphezu, ivlogging yindlela entle yokwabelana ngeendawo nehlabathi. Okokuqala, i-vlogging yobuqu kwaye ayithwali i-ajenda yokuthengisa efihliweyo. Okwesibini, ivlogging ibonisa abantu iinyani ezingaziwayo kunye nee-anecdotes ngasemva kweendawo ezidumileyo kwihlabathi liphela. ke, vlogging sisixhobo esikhulu eco-friendly, ikuvumela ukuba wabelane ngamabali enkcubeko ethile, simahla kungafunwanga ntlawulo, kunye ne-ajenda, kunye nehlabathi labahambi.
Olunye uhlobo lwe-vlogging kunye nefom yedijithali yejenali yokuhamba iblogi. Inani leeblogi eziphilayo namhlanje libalaseleyo, ngoko unokufumana imizekelo emininzi yeeblogi zokuhamba kwi-intanethi ukuba awuqinisekanga ungayiqala njani ibhlog yakho yokuhamba. Amaqokobhe enathi, ungaqala ngokulula ibhlog yakho kwiWordPress, layisha iifoto zokuhamba, iindlela zohambo, iingcinga, kunye nokuninzi.
Umahluko omkhulu phakathi kweblogi kunye nejenali yokuhamba kukuba iblogi yindlela ye-intanethi, kwaye iyafumaneka kwihlabathi liphela kwiwebhu. Iingcinga zakho zobuqu zinokuba yintsholongwane, kwaye unabalandeli abaninzi, oya kuthanda ukufunda kwaye ukhuthazwe ziinkumbulo zakho zokuhamba.
8. Iindlela zokuBhalisa iiMemori zokuHamba: Instagram
Imithombo yeendaba enamandla kakhulu kwihlabathi lanamhlanje yimidiya yoluntu, kwaye ukuba ichaneke ngakumbi, Instagram. namhlanje, ungalayisha naluphi na ulwazi olufunayo malunga nayo nayiphi na indawo emhlabeni, kwi-Instagram. Ngaphezu, iiblogi zokuhamba kunye neempembelelo zokuhamba’ eyona ndlela ilungileyo yokubhala iinkumbulo zokuhamba kukufaka amabali, iireli, kunye neposi kwi-Instagram.
Ngenxa yoko, zenzele iphepha le-Instagram elinemibala kunye nelonwabisayo, ukubhala iihambo zakho, kunye neenkumbulo ezixabisekileyo. Khawufane ucinge indlela ekuya kuthandeka ngayo ukujonga kwiphepha elinemibala, ukubukela zonke iividiyo ezimfutshane, kunye neesnaps ozithathe kuhambo lwakho, kwiinyanga, kunye neminyaka ezayo emva kohambo lwakho.
9. Yenza ibhokisi yeenkumbulo
Iimephu, iiposikhadi, kunye namatikiti emyuziyam zizinto nje ezimbalwa abanye bethu abathanda ukuzigcina kwiihambo zethu ezininzi kwihlabathi. Iyamangalisa indlela iphetshana elincinane okanye ikhadi elinokukubuyisela ngayo umva ngeemayile ezininzi, kwinkcubeko eyahlukileyo, amaxesha, kunye namaxesha. ke, endaweni yokuba zonke ezi nkumbulo zintle zilahlekile kwi-backpack, okanye isipaji, ukwenza ibhokisi yeenkumbulo yindlela emangalisayo yokubhala zonke ezi nkumbulo zokuhamba, Ubagcine ekhuselekile.
Njengokuba, ungathatha ibhokisi yezihlangu endala, yihombise, faka zonke iinkumbulo zakho zokuhamba ngaphakathi, uze uzibonise kwishelufu. Olunye uluvo lwebhokisi yeenkumbulo kukwenza ibhokisi ukusuka kumaplanga asetyenzisiweyo, ngoko iyinto eco-friendly kwaye iyayila. Ngolunye uhlobo, ibhokisi yeenkumbulo yenye ye 10 iindlela ezikhethekileyo zokubhala iinkumbulo zokuhamba.
Uhambo lwaseDatshi ukuqala eqala I-Polarsteps ngomnye umzekelo wendlela onokuthi ubhale ngayo iinkumbulo zokuhamba kwihlabathi elikhawulezayo letekhnoloji esiphila kulo.. I-Polarsteps app ikuvumela ukuba ulandele amanyathelo akho, iingcinga, izimvo, iindawo ezityelelweyo, kunye nokunye okuninzi ukusuka kwintuthuzelo yefowuni yakho, ngokucofa kanye. Esinye isiphumo esimangalisayo sokulandelela uhambo lwakho yi-albhamu yeefoto zokuhamba ezimangalisayo, ekugqibeleni, yenzelwe kwaye yenziwe nguwe, ngamaxesha owathandayo.
Ukushwankathela, iindlela ezahlukeneyo zokubhala iinkumbulo zakho zokuhamba, ukusuka kwinqanaba lokuqala alinasiphelo. Ukusuka kwii-apps ukuya kwiijenali zokuhamba ezindala kunye nezilungileyo, ungakhetha nayiphi na kwezi 10 iindlela ezichazwe ngasentla, kuxwebhu, ukwabelana, kwaye ukhumbule iihambo zakho ezimangalisayo kwihlabathi jikelele.
Thina Gcina A Isitimela Uya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo olungalibalekiyo olujikeleze iYurophu, apho unokudala iinkumbulo zobomi bonke.
Ngaba uyafuna ukushumeka iposi yethu yebhlog “Iindlela ezili-10 zokuBhala iiMemori zokuHamba”Kwisiza sakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fways-document-travel-memories%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, kwaye ungazitshintsha i / es ukuya / fr okanye / de kunye nezinye iilwimi.
UxwebhuTravelMemories	landelela uhambo lwakho	TravelMemories
10 Izikwere eziMangalisa ngokumangalisayo eYurophu
Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha ukuhamba iBritane, Uloliwe Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Ukuhamba ngololiwe eRashiya, Qeqesha uKhenketho e-UK, Ukuhamba eYurophu
Iingcebiso zokuhamba, Ukuhamba eYurophu
7 Best Uhambo Usuku Ukusuka Naples In Italy
12 IiNdawo zokuHamba zeMillennium kwihlabathi liphela
Phezulu 10 Izixeko eziSlow eYurophu
10 Izibane ezigqwesileyo zokukhanyisa iiHambo zakho eYurophu